Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Lany olo-manga ve Madagasikara ?
Elabe no niadian’ny olona eto Imerina ny hahazoana ny filohan’ny repoblika sy hitondrana ny firenena. Tsy mahagaga izany satria dia tanjona sy faniriana toa ny ataon’ny foko isan-karazany manerana ny nosy, na ny ampovoan-tany izany na koa ny any an’indrana. Iza tokoa moa no tsy manonofy ny ho filoham-pirenena izany? Maro no te ho tonga amin’izany toerana izany ny Malagasy saingy iray ao anatin’ny 24 tapitrisa ihany no tsy maintsy tonga eo.
Tamin’ny repoblika voalohany dia ingahy Philibert Tsiranana no filoham-pirenena. Avy any Anahidrano ao amin’ny faritra Sofia no fiaviany ao amin’ny faritanin’i Mahajanga no fiaviany. Antakarana no foko misy azy. Mpiasam-panjakana izy ary mpampianatra no asa niofanany. Tao amin’ny antoko politika Padsm (Parti des deseritiers de Madagascar) na ny antokon’ny ory eto Madagascar no nisy azy izay nifanohitra tamin’ny MDRM (Mouvement Démocratique pour la Rénovation de Madagascar). Ity farany izay nisy ny tia tanindrazana.
Ny filoham-pirenena faharoa dia ingahy Didier Ratsiraka izay miaramila manamboninahitra ambony tao amin’ny tafika andranomasina Malagasy. Nandalo fiofanana maro tany ivelany alohan’ny naha filoham-pirenena azy ny taona 1976. Avy any Niarovanivolo, tanàna kely ao amin’ny distrikan’i Mahanoro ao amin’ny faritanin’i Toamasina.
Ny filoham-pirenena nanaraka azy dia ingahy Zafy Albert. Dokotera ambony izy ary efa misalotra ny anarana ho profesora. Vita fianarana tany Frantsa. Tsy mba nanana antoko politika talohan’ny nidirany ho filoham-pirenena saingy efa minisitry ny fahasalamana tamin’ny taona 1972-1974 tamin’ny andron’ny tetezamita notantanin’i Gabriel Ramanantsoa. Avy any Ambilobe any amin’ny faritanin’Antsiranana no fiaviany.
Ny filoham-pirenena nanaraka azy dia ingahy Marc Ravalomanana izay tsy fantatra mihitsy ny diplaoma ananany hatramin’izao. Misy ny milaza fa tsy manana BEPC izy. Mpivaro-dronono tamin’ny bisikileta no nahafatarana azy. Ny diplaoma fantatra fa azony tamin’izy filoham-pirenena dia ny “honoris causa” izay diplaoma tsy misy vidiny fa omena ho fankasitrahana fotsiny ihany. Avy any Imerikasinina ao Manjakandriana ato amin’ny faritanin’Antananarivo no fihaviany. Lasa filoham-pirenena satria sady mpanakarena no tsara tarehy ka nahatonga ny fitenenana hoe “ Marc Ravalomanana sady bogosy no mpanana”. Dia izay ihany no nifidianan’ny Malagasy azy. Nentin’ny hambopo fotsiny ihany ity olona ity fa tsy nieritreritra hitondra firenena velively.
Ingahy Andry Nirina Rajoelina no filoham-panjakana nandimby azy tamin’ny taona 2009-2013. Izy indray dia tsy fantatra marina koa ny mari-pahaizana ananany. Ny fantatra fotsiny dia olon’ny serasera izy ary isan’ny tanora nivoatra tao amin’ity sehatra ity tamin’ny lafiny maro. Hatramin’ny fanentanana fandaharana tao amin’ny onjan-peo dia vitany avokoa.
Tsy mbola hiresaka an’ingahy Hery Rajaonarimampianina isika satria efa io iarahana mahita io ny zavatra nataony.
Fa mba nankaiza ny olo-manga sy ny manampahaizana teto Madagasikara ankehitriny? Mitady olona tia tanindrazana, manampahaizana, sy manampahendrena ny firenena ankehitriny. Lany ve ny olo manga? Tsy misy intsony ve ny olona madio? Miandry izany ny vahoka Malagasy ankehitriny.